Haddii Aad Macmacaanka Jeceshahay Bal Nala Eeg Halisaha Caafimaad Ee Ku Xeeran | Salaan Media
Haddii Aad Macmacaanka Jeceshahay Bal Nala Eeg Halisaha Caafimaad Ee Ku Xeeran
London:18-Aug-2013-(SM)-Warbixintan waxa aynu ku soo qaadanaynaa halisaha caafimaad ee ka imankara badsashada cuninta iyo cabitaanka waxyaabaha Macmacaanka ah.
Daraasad lagu sammeeyay dalka Iswiidhan ayaa sheegeysa in dadka sida aadka ah u cuna sonkorta iyo waxaabaha kale ee macaanka ah ay aad ugu nugul yihiin in uu ku dhaco cudurka wadna istaagga iyo cudurada kale ee wadnaha iyada oo daraasadan lagu sammeeyay dad gaadhaya 4300 oo qof.
Natiijada daraasadan oo lagu soo daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee ka faallooda arrimaha nafaqada ee afka qalaad lagu yidhaahdo Journal of Nutrition, ayaa waxay sheegtay in dadka sida aadka ah u cunay sonkorta in dhiigooda uu ku bato dufanka ama subagga iyada oo aanay ku xidhnayn buurnaashada qofka.
Sida aynu la wada socono dadka Soomaalida ayaa waxay caadaystaan cunista waxyaabaha ay sonkorta ka buuxdo sida Shaaha iyo Xalwadda, waxaana marag ma doonta ah in marka meel lagugu marti qaado ay qasab tahay in labadaasi midkood lagu soo hor dhigo.
Qormadeenan maanta, ayaa waxa ay kula talinaysaa dadka soomaalida ah in qaadashada waxyaabaha macaanka ku badan yahay la iska yareeyo, sida shaaca oo loo isticmaalo sonkor ka yar sida aad adigu jeceshahay waxay sahlaysaa haddii aad badsato inuu keeni karo wadno xanuun iyo cudurka sonkoroowga.
Dadka Soomaalida ah ayaa ah kuwo iyagu si aad ah u jecel waxyaabaha macmacaan, iyadoo badankoodu aanay gubin macaankaas badan ee ay isticmaalaan oo ay meel iskala fadhiistaan, iyadoo arrintaasina halis caafimaad ku keeni karto.